MAPAR : Miverina indray ny fandrobana -
AccueilRaharaham-pirenenaMAPAR : Miverina indray ny fandrobana
Tanana zatra mitsotra ny an’ny Mapar, ka tsy afaka mivonkona intsony. Tany Morondava, ny dahalo fahavalom-bahoaka mihitsy no nantsoin’ny olon’ ny Mapar, izay tarihin’ny depiote Hawel Mamod’Ali, hiakatra ny tanàna hamoritra ireo vahoakan’i Morondava.
Efa nopotehin’ny Mapar ny firenena ny taona 2009, tahaka ity zava- nitranga tany Morondava ity. Vao mainka ve homena fahefana handatsaka indray ny firenena anatin’ ny haizin’ny disadisa sy ny korontana, ary ny fahantrana. Hampanantsoina eny anivon’ny OMC ny solombavambahoaka Mapar Hawel Mamod’Ali, taorian’ny korontana niseho tao Morondava, izay nahafatesana olona iray sy nahamay ny kazerin’ny zandarimaria tany an-toerana. Nambaran’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, fa nampanantsoana io depiote io, satria nihoatra ny fefy ny zavatra nataony, « nampiantso ny solombavambahoakan’ i Morondava ny OMC, izay nanentana ireo olona ireo hanao io hetsika io. Mbola tsy fantatra hoe inona ny fepetra raisina mikasika izany olona izany, satria nihoatra ny loha no nataon’ilay solombavambahoaka, izay nihantsy ny olona » hoy izy. Voaporofo tokoa eto fa tompon’antoka tamin’ny fanentanana ny mponina tao an-tampon-tanànan’i Morondava, ny depiote Hawel Mamod’Ali, satria dia nohazavain’ny ben’ny tanàna tao an-toerana fa niditra mivantana tamin’ny haino aman-jery izay azy ity depiote ity. Nambaran’ny ben’ny tanàna tao Morondava io, fa « tamin’ny onjampeon’ny fréquence i Menabe, izay an’ny depioten’i Morondava, no nanentanana ny olona, ary nahagaga fa naveriny nandritra ny dimy andro ny fanentanana ny dahalo hiakatra an-tanàna. Nambarany tamin’izany ny hoe : Miakara ry dahalo, ento ny fitaovam-piadiana, ento ny fiadiana, ento ny moara fa hiady amin’ny fanjakana isika» hoy io ben’ny tanàna tao Bemanonga io.
Mitohy hatrany noho izany ny asa fanakorontanana ataon’ny Mapar, tahaka ny tamin’ny taona 2009. Ny zava-nitranga tany Morondava io dia mitovy tsy misy valaka tamin’ny tranga ny 26 ny volana janoary taona 2009, izay nisiana fandrobana. Manginy fotsiny ny efa nitaritan’izy ireo ny hetsika tamin’ ny 21 aprily farany teo, izay mbola nisiana olona roa maty. Mbola tsy manomboka akory izany ny fampielezan-kevitra, dia mampiseho ny talentany amin’ ny fanakorontanana ny Mapar. Noho izany raha mitohy izao zava- mitranga izao, dia ho avy eto Madagasikara ny miaramila misatro- manga ny firenena mikambana hampandry tany, satria dia mikorontana ny firenena. Ankehitriny tokoa dia hita fa manao izay tiany ny solombavambahoaka Mapar, satria dia mianoka anatin’ny fanana ilay tsy maha matimanota izy ireo. Tahaka izany ilay solombavambahoaka, nitondra baoritra feno vola. Izay indray dia mampakatra dahalo an-tanàna, ka mihevitra fa tany tsy misy fanjakana eto. Marihina fa ny solombavambahoakan’i Morondava Hawel Mamod’Ali, dia efa voatonotonona tamin’ny fandorana ny orinasa Sucoma tao Morondava. Mbola andrasana ihany koa ny valin’izay fanadihadiana izay.
Marc Ravalomanana : Nanjaka ny hosoka sy ny herisetra
Nanao fanambarana manoloana ny zava-misy amin’izao fihodinana faharoa izao ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Nanjaka loatra nandritra ity fifidianana iray ity ny herisetra sy ny hosoka, nentina nanosihosehana ny safidim-bahoaka… Nibaribary loatra ny hosoka ...Tohiny